Akụkọ - Mgbaze osisi na-enweghị ntu ma ọ bụ kposara
Gluing bụ akụkụ dị mkpa nke ọtụtụ osisi eji arụ ọrụ. Mana ịchọpụta osisi kacha mma maka ọrụ gị abụghị’t dị mfe mgbe niile. Ebe a’s ihe ị kwesịrị ịmara iji kpebie nke osisi gluu ga-arụ ọrụ kacha mma maka ọrụ gị.
Polyvinyl acetate (PVA) gluu bụ ụdị ụdị osisi glu. Typedị a gụnyere ihe ndị na-acha ọcha na odo dị ọcha, ma ọ bụ ihe a na-akpọkarị“ọkwa nkà’s gluu.” Enwere ike iji Iit mee ihe maka ọtụtụ – ma ọ bụghị ihe niile – oru ngo.
Zoo gluu sitere na ngwaahịa anụmanụ. Ọ nwere ike ịbịa dị ka mmiri mmiri ma ọ bụ dị ka granulu, flakes, ma ọ bụ akwa akwa chọrọ ịgbasa na mmiri. Okwesiri ka a kpoo ya ma tinye ya na ahịhịa, ọ na-ejikọta dị ka ọ na-ajụ oyi.
Epoxy na-abata na ihe abụọ dị iche iche: ihe siri ike na resin. A na-agwakọta akụkụ ndị ahụ iji mepụta njikọ kemịkal nke, mgbe ọ siri ike, na-enweghị mmiri ma na-ejupụta oghere. Epofọdụ epoxies anaghị egbu oge, mana ha bụ ụfọdụ glues osisi kachasị ike dị. Ọ bụrụ na ị na-achọ epoxy na’s mfe itinye na-arụ ọrụ dị ukwuu na osisi, gbalịa Loctite Epoxy Ndenye Set ma ọ bụ otu n'ime Loctite’s ọtụtụ epoxies maka ngwa ọ bụla.
Polyurethane glues bụ ụdị mmiri mmiri na-arụ ọrụ nke na-agba ụfụfụ ka ọ na-akpọnwụ n'ime nrapado nke ọma.
Maka ọtụtụ ọrụ osisi, Loctite PL Wood Lumber, Paneling & Trim nrapado bụ nhọrọ siri ike.
Lelee vidiyo a ma mụtakwuo maka iji Loctite PL Premium Construction nrapado maka ọrụ gị niile dabere na osisi:
Polyvinyl acetate (PVA) gluu bụ ihe eji eme ihe na ihe eji eme osisi. Ọ bụ enweghị ụcha na isi. PVA gluu na-esetịpụ kachasị mma na mpaghara nwere ikuku ikuku dị mma ma kpoo ngwa ngwa na ụlọ okpomọkụ. Ọ bụghị PVA glues niile anaghị egbochi mmiri, yabụ lelee ngwaahịa gị’Ntuziaka.
Ọ bụrụ n’ịga n’ihu nke ọma, họrọ glues ndị kwesịrị ekwesị, ma soro usoro ihicha ziri ezi, ịkpokọta osisi n’ụzọ dị irè nwere ike ịbụ snap Soro usoro ndị a dị mfe maka iji PVA gluu na glues ndị ọzọ.
1. Tinye gluu aka na elu nke osisi a ga-ejikọ. Jiri akwa iji hichapụ ihe ọ bụla wụfuru ma ọ bụ jubiga ókè ozugbo.
2.Faa osisi gluu n'ime mkpa, na-agbanwe agbanwe uwe iji ahịhịa ma ọ bụ plastic mgbasa.
3. Pịa iberibe ọnụ. Ikwesiri igbanwe ihu elu na ihu ntakịrị iji hụ uwe mkpuchi na ịhapụ ikuku ọ bụla nwere ike ibute oghere.
4.Jiri mgbatị G iji chebe iberibe ahụ.
5.Ka ka iberibe glued anọdụ ala n'enweghị nsogbu maka oge ịpị ka akwadoro nke ntuziaka ngwaahịa a nyere.
6. Gbanyụọ gluu ọ bụla akọrọ.